ကြီးလာရင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ပြောတဲ့ အသက်(၄)နှစ်အရွယ် ဥာဏ်ကြီးရှင် စလားလား - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / ကြီးလာရင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ပြောတဲ့ အသက်(၄)နှစ်အရွယ် ဥာဏ်ကြီးရှင် စလားလား
ကြီးလာရင် အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ပြောတဲ့ အသက်(၄)နှစ်အရွယ် ဥာဏ်ကြီးရှင် စလားလား
Apann Pyay 4:42 PM ထူးဆန်းထွေလာ , ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ငပုတောမြို့နယ် တမန်ချောင်းကျေးရွာတွင် အသက် ၄ နှစ်ကျော်အရွယ်သာ ရှိသေးသော်လည်း မြန်မာစာကို စာလုံးမပေါင်းဘဲ လက်တန်းဖတ်ပြနိုင်သူ ကလေးငယ်တဦးရှိနေကြောင်း သ တင်းရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ထူးဆန်းသော ဥာဏ်ကြီးရှင် ကလေးငယ်အကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန် တမန်ချောင်း ရွာသို့ သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။တမန်ချောင်းရွာသည် ငပုတောမြို့နယ်တွင်ရှိသောကြောင့် ရန်ကုန်မှ ပုသိမ်၊ ပုသိမ်မှ ငပုတောသို့ ကားလမ်းဖြင့်သွားခဲ့ပြီး ငပုတောမှ တမန်ချောင်းသို့ စက်လှေစီးကာ ခရီးဆက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မှ ဇူလိုင် ၁ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်တွင် ထွက်ခွာလာခဲ့သော ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သည် ပုသိမ်သို့ နံနက် ၅ နာရီခွဲခန့်တွင် ရောက် ရှိခဲ့သည်။ ပုသိမ်တွင် တနာရီခန့်ခေတ္တနားပြီးနောက် ခရီးဆက်ခဲ့ရာ ငပုတောသို့ နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ငပုတောမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အကူအညီဖြင့် ကရင်လူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ရာ တမန်ချောင်းသို့ နံနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် စက်လှေဖြင့် ထွက်ခဲ့ကြရာ နံနက် ၉ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောက်ရှိချိန်တွင် တမန်ချောင်းကျေးရွာ NLD မှ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်တွင် ခေတ္တနားခဲ့ကြပြီး ထူးဆန်းသော ဥာဏ်ကြီးရှင်ကလေး နှင့်တွေ့ချင်နေသောကြောင့် သူ့အိမ်သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ ကလေးငယ်၏ အိမ်သို့သွားရောက်ခဲ့ရာလမ်းတွင် ကလေးငယ်၏မိခင်နှင့်အဒေါ်ဖြစ်သူတို့သည် ကလေးငယ်ကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ခေါ်၍ တနေရာသို့သွားရန် ပြင်ဆင် နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို ရှောင်ပုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မရောက်မီကလေးငယ်ကို NRC နှင့် MNTV သတင်းဌာနတို့က လာရောက်၍တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြပြီး ကလေး ငယ်၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
”ကလေးက ပြောရတာတွေ များလာတော့ သိပ်မပြောချင်တော့ဘူး။ နောက်အဖွဲ့တွေ လာရင်တော့ မဖြေခိုင်းချင်တော့ဘူး။ ကလေးစိတ်ညစ်သွားမှာ စိုးလို့”ဟု ကလေးငယ်၏ မိခင် နန့်ပွင့်ဖြူမွှေးက ပြောသည်။ကျွန်တော်တို့လည်း အားနာစွာဖြင့်ပင် သိလိုသည်များကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ကလေးငယ်၏ နာမည်မှာ ကရင်လို ”စလားလား”ဖြစ်ပြီး ဗမာလို မောင်လမင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ ကျောင်းနာမည်အဖြစ် မောင်ရှင်းသန့်မျိုးဟု ပေးထားသည်။တမန်ချောင်းကျေးရွာသားတဦးဖြစ်သူ အိုင်လားသည် အိပ်မက်ဆုံရာအစီအစဉ်တွင် Top Ten စာရင်း ၀င်ခဲ့သောကြောင့် သူ့အကြောင်းကို လာရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရာမှ စလားလားအကြောင်းကို သိရှိသွားခဲ့ကြပြီး လူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စလားလားကို ဖခင် မန်းမျိုးညီနှင့် မိခင် နန့်ပွင့်ဖြူမွှေးတို့က ၂၁ – ၁၁ – ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူး ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် တမန်ချောင်းရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မွေးဖွားသော်လည်း စလားလားက သူ့ကိုယ်သူ တနင်္လာသားဟု ပြောသည်။
”ဗုဒ္ဓဟူး မဟုတ်ဘူး တနင်္လာ ကျား”ဟု စလားလားက ပြောသည်။စလားလားသည် ၃ နှစ်အရွယ်တွင် မြန်မာစာများကို တလုံးချင်းဖတ်တတ်နေပြီး စတင်ဖတ်တတ်သော စကားလုံးမှာ ‘ရောဂါ’ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အခြားစကားလုံးများကို ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းဖြင့် ယခုအခါ မြန်မာ စာဖြင့် ရေးထားသည့် စာများအားလုံးကို ဖတ်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့တွင်ပါလာသည့် News Watch ဂျာနယ်မှ စာကြောင်းများကို ဖတ်ပြခိုင်းရာ စလားလားသည် အထစ်အငေါ့မရှိဖတ်ပြနိုင်သည်ကို ထူးဆန်းစွာ တွေ့ခဲ့ရသည်။ထို့ပြင် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က လက်များထောင်၍ ဂဏန်းသင်္ချာပေါင်းခိုင်းရာ မှန်ကန်စွာပေါင်း နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသည့် ကလေးငယ် စလားလားကို သာမန်ကလေးများကဲ့သို့ တနှစ် တတန်းတက်ရမည်ကို သူ့မိဘများက သိပ်မလိုလားဘဲ ကလေးငယ်၏ ဥာဏ်ရည်ပေါ်မူတည်၍ အတန်း တင်ပေးမှုများပြုလုပ်ပေးရန် ဆန္ဒရှိနေကြသည်။
”KG က စာလည်း မသင်ရဘူး။ တတန်းနှစ်တန်းပဲ တက်ချင်တယ်လို့ သူက ပြောတယ်။ ကလေးရဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ စနစ်တကျသင်ကြားပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့တော့ အဲဒီလိုလုပ်လို့ရသလား မရသလားတော့ မသိဘူး”ဟု နန့်ပွင့်ဖြူမွှေးက ပြောသည်။ကိုလိုနီခေတ်တွင် မန္တလေးမြို့နေရှင်နယ်ကျောင်းမှ မအုန်းဆိုသူသည် ဥာဏ်ကောင်းလွန်းသောကြောင့် ခြောက်လတခါ တတန်းအောင်သဖြင့် ငါးနှစ်နှင့် ၁၀ တန်းအောင်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်သမိုင်းပါ မောက္ခ M.A ဒေါ်အုန်းအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ဖူးကြောင်း ငပုတောမြို့နယ် NLD ပါတီ၏ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးမျိုးကပြောသည်။”ဒီကလေးလေးပဲ M.A ဒေါ်အုန်းလို ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ မသိသေးဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ကျောင်းမနေရသေးသည့် အသက် ၄ နှစ်ကျော်အရွယ် ကလေးငယ်တယောက်က မြန်မာစာများကို စာလုံးမပေါင်းဘဲ လက်တန်းဖတ်ပြနိုင်ခြင်းကို မယုံကြည်သောကြောင့် အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ခဲ့ဖူးကြောင်း တမန် ချောင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ မနီလာကပြောသည်။
”ပထမတော့ မယုံဘူးလေ။ တရွာထဲနေပြီး သတင်းတော့ ကြားနေရတယ်။ တရက် စလားလားလေး အိမ်ကို လာလည်တော့ အိမ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ စာကြောင်းတွေကို ဖတ်ခိုင်းတော့ ဖတ်ပြနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်း ထဲမှာ မှတ်ထားတဲ့ လူနာမည်တွေကိုလည်း ဖတ်ပြနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့မှ ယုံသွားတာ၊ အံ့လည်း အံ့သြ တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။စလားလားသည် ကလေးတယောက်နှင့်မတူဘဲ လူကြီးတယောက်၏ အိနြေ္ဒမျိုးဖြင့်နေသည်ကို တွေ့ ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့မေးသည့်မေးခွန်းများကို လူကြီးတယောက် ဖြေသလိုဖြေသည်။ အခြားကလေးများကဲ့သို့ ကစားလေ့မရှိဘဲ စာဖတ်ခြင်းနှင့် စာသင်ခြင်းတို့ကိုသာ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူထံမှ သိရသည်။”သူက အားနေရင် စာဖတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗမာလိုသာ ဖတ်တတ်တာ အဓိပ္ပာယ်ကို သူမသိဘူး။ ထမင်း စားပြီးပြီးလားလို့ ဖတ်တတ်တယ်။ ဖတ်ပြီးရင် ထမင်းစားပြီးပြီးလားဆိုတာ ဘာလဲလို့ ကရင်လို ပြန်မေးတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကို သူမသိဘူး။ စာသင်တိုင်း ဆော့တယ်။ တခြားကလေးတွေလို ဘောလုံးကန်တာတို့ ဘာတို့ မလုပ်ဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဥာဏ်ကြီးရှင်လေး စလားလားက သူကြီးလာရင် အင်ဂျင်နီယာ လုပ်မည်ဟု ပြောသည်။ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတာ ဆောက်လုပ်ရေးတွေလုပ်တာကို ပြောတာဟု ၎င်းက ကျွန်တော်တို့ကို ရှင်းပြနေသေးသည်။စလားလားကဲ့သို့ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသော ကလေးငယ်များအတွက် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန် လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ အစီအစဉ်တရပ်ဖော်ဆောင်ပေးပါက ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်မှာ အားတက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထူးဆန်းသော ဥာဏ်ကြီးရှင်ကလေးများကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်၍ ဂရုတစိုက်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။စလားလားနှင့် သူ့မိခင်တို့ကို သိချင်သည်များ မေးမြန်းပြီးနောက် ပြန်ရန် နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ဖခင်ဖြစ် သူမှာ လယ်ထဲဆင်းနေသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့နှင့် မတွေ့လိုက်ရပါ။ ကျွန်တော်တို့ နှုတ်ဆက်ချိန်တွင် စလားလားသည် အခြားကလေးငယ်များကဲ့သို့ ‘တာ့တာ’မပြဘဲ လူကြီးတဦးကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို တဦး ချင်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဥာဏ်ကြီးရှင် စလားလား အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်၊ မဖြစ် ဆိုတာကတော့ . . . ။
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ငပုတောမွို့နယျ တမနျခြောငျးကြေးရှာတှငျ အသကျ ၄ နှဈကြျောအရှယျသာ ရှိသေးသျောလညျး မွနျမာစာကို စာလုံးမပေါငျးဘဲ လကျတနျးဖတျပွနိုငျသူ ကလေးငယျတဦးရှိနကွေောငျး သ တငျးရရှိခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ထူးဆနျးသော ဉာဏျကွီးရှငျ ကလေးငယျအကွောငျးကို သိရှိနိုငျရနျ တမနျခြောငျး ရှာသို့ သှားရောကျဖွဈခဲ့သညျ။တမနျခြောငျးရှာသညျ ငပုတောမွို့နယျတှငျရှိသောကွောငျ့ ရနျကုနျမှ ပုသိမျ၊ ပုသိမျမှ ငပုတောသို့ ကားလမျးဖွငျ့သှားခဲ့ပွီး ငပုတောမှ တမနျခြောငျးသို့ စကျလှစေီးကာ ခရီးဆကျခဲ့သညျ။ ရနျကုနျမှ ဇူလိုငျ ၁ ရကျ နံနကျ ၁ နာရီခနျ့တှငျ ထှကျခှာလာခဲ့သော ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့သညျ ပုသိမျသို့ နံနကျ ၅ နာရီခှဲခနျ့တှငျ ရောကျ ရှိခဲ့သညျ။ ပုသိမျတှငျ တနာရီခနျ့ခတ်ေတနားပွီးနောကျ ခရီးဆကျခဲ့ရာ ငပုတောသို့ နံနကျ ၇ နာရီခှဲခနျ့တှငျ ရောကျရှိခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ငပုတောမွို့နယျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၏ အကူအညီဖွငျ့ ကရငျလူမြိုးမြား အမြားဆုံးနထေိုငျရာ တမနျခြောငျးသို့ နံနကျ ၈ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ စကျလှဖွေငျ့ ထှကျခဲ့ကွရာ နံနကျ ၉ နာရီခှဲ ခနျ့တှငျ ရောကျရှိခဲ့သညျ။
ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ရောကျရှိခြိနျတှငျ တမနျခြောငျးကြေးရှာ NLD မှ တာဝနျရှိသူမြားက လာရောကျ ကွိုဆိုခဲ့ကွသညျ။ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးနအေိမျတှငျ ခတ်ေတနားခဲ့ကွပွီး ထူးဆနျးသော ဉာဏျကွီးရှငျကလေး နှငျ့တှခေ့ငျြနသေောကွောငျ့ သူ့အိမျသို့ သှားခဲ့ကွသညျ။ ကလေးငယျ၏ အိမျသို့သှားရောကျခဲ့ရာလမျးတှငျ ကလေးငယျ၏မိခငျနှငျ့အဒျေါဖွဈသူတို့သညျ ကလေးငယျကို ဆိုငျကယျဖွငျ့ချေါ၍ တနရောသို့သှားရနျ ပွငျဆငျ နသေညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ အမှနျတော့ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ကို ရှောငျပုနျးခွငျးဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောတို့ မရောကျမီကလေးငယျကို NRC နှငျ့ MNTV သတငျးဌာနတို့က လာရောကျ၍တှဆေုံ့မေးမွနျးခဲ့ကွပွီး ကလေး ငယျ၏ လှုပျရှားမှုနှငျ့ ဉာဏျရညျထကျမွကျမှုတို့ကို မှတျတမျးတငျခဲ့ကွပွီးဖွဈသညျ။
”ကလေးက ပွောရတာတှေ မြားလာတော့ သိပျမပွောခငျြတော့ဘူး။ နောကျအဖှဲ့တှေ လာရငျတော့ မဖွခေိုငျးခငျြတော့ဘူး။ ကလေးစိတျညဈသှားမှာ စိုးလို့”ဟု ကလေးငယျ၏ မိခငျ နနျ့ပှငျ့ဖွူမှေးက ပွောသညျ။ကြှနျတျောတို့လညျး အားနာစှာဖွငျ့ပငျ သိလိုသညျမြားကို မေးမွနျးဖွဈခဲ့ကွသညျ။ ကလေးငယျ၏ နာမညျမှာ ကရငျလို ”စလားလား”ဖွဈပွီး ဗမာလို မောငျလမငျးဟု အဓိပ်ပာယျရပါသညျ။ ကြောငျးနာမညျအဖွဈ မောငျရှငျးသနျ့မြိုးဟု ပေးထားသညျ။တမနျခြောငျးကြေးရှာသားတဦးဖွဈသူ အိုငျလားသညျ အိပျမကျဆုံရာအစီအစဉျတှငျ Top Ten စာရငျး ဝငျခဲ့သောကွောငျ့ သူ့အကွောငျးကို လာရောကျရိုကျကူးခဲ့ရာမှ စလားလားအကွောငျးကို သိရှိသှားခဲ့ကွပွီး လူသိမြားလာခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
စလားလားကို ဖခငျ မနျးမြိုးညီနှငျ့ မိခငျ နနျ့ပှငျ့ဖွူမှေးတို့က ၂၁ – ၁၁ – ၂၀၁၂ ခုနှဈ ဗုဒ်ဓဟူး ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနဈတှငျ တမနျခြောငျးရှာ၌ မှေးဖှားခဲ့သညျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ မှေးဖှားသျောလညျး စလားလားက သူ့ကိုယျသူ တနင်ျလာသားဟု ပွောသညျ။
”ဗုဒ်ဓဟူး မဟုတျဘူး တနင်ျလာ ကြား”ဟု စလားလားက ပွောသညျ။စလားလားသညျ ၃ နှဈအရှယျတှငျ မွနျမာစာမြားကို တလုံးခငျြးဖတျတတျနပွေီး စတငျဖတျတတျသော စကားလုံးမှာ ‘ရောဂါ’ ဖွဈသညျ။ ထို့နောကျ အခွားစကားလုံးမြားကို ဖတျရငျးဖတျရငျးဖွငျ့ ယခုအခါ မွနျမာ စာဖွငျ့ ရေးထားသညျ့ စာမြားအားလုံးကို ဖတျနိုငျနပွေီဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောတို့တှငျပါလာသညျ့ News Watch ဂြာနယျမှ စာကွောငျးမြားကို ဖတျပွခိုငျးရာ စလားလားသညျ အထဈအငေါ့မရှိဖတျပွနိုငျသညျကို ထူးဆနျးစှာ တှခေဲ့ရသညျ။
ထို့ပွငျ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့က လကျမြားထောငျ၍ ဂဏနျးသင်ျခြာပေါငျးခိုငျးရာ မှနျကနျစှာပေါငျး နိုငျသညျကို တှရေ့သညျ။ ဉာဏျရညျမွငျ့မားသညျ့ ကလေးငယျ စလားလားကို သာမနျကလေးမြားကဲ့သို့ တနှဈ တတနျးတကျရမညျကို သူ့မိဘမြားက သိပျမလိုလားဘဲ ကလေးငယျ၏ ဉာဏျရညျပျေါမူတညျ၍ အတနျး တငျပေးမှုမြားပွုလုပျပေးရနျ ဆန်ဒရှိနကွေသညျ။
”KG က စာလညျး မသငျရဘူး။ တတနျးနှဈတနျးပဲ တကျခငျြတယျလို့ သူက ပွောတယျ။ ကလေးရဲ့ ဉာဏျရညျနဲ့ စနဈတကသြငျကွားပေးနိုငျမယျဆိုရငျ ထူးထူးခြှနျခြှနျဖွဈမယျလို့ ယုံကွညျတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပညာရေးစနဈနဲ့တော့ အဲဒီလိုလုပျလို့ရသလား မရသလားတော့ မသိဘူး”ဟု နနျ့ပှငျ့ဖွူမှေးက ပွောသညျ။ကိုလိုနီခတျေတှငျ မန်တလေးမွို့နရှေငျနယျကြောငျးမှ မအုနျးဆိုသူသညျ ဉာဏျကောငျးလှနျးသောကွောငျ့ ခွောကျလတခါ တတနျးအောငျသဖွငျ့ ငါးနှဈနှငျ့ ၁၀ တနျးအောငျခဲ့ပွီး နောငျတှငျ မန်တလေးတက်ကသိုလျသမိုငျးပါ မောက်ခ M.A ဒျေါအုနျးအဖွဈ ထငျရှားခဲ့ဖူးကွောငျး ငပုတောမွို့နယျ NLD ပါတီ၏ရုံးအဖှဲ့မှူး ဦးမြိုးကပွောသညျ။”ဒီကလေးလေးပဲ M.A ဒျေါအုနျးလို ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီပညာရေးစနဈနဲ့ ဘယျလိုဖွဈမလဲတော့ မသိသေးဘူး”ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။ကြောငျးမနရေသေးသညျ့ အသကျ ၄ နှဈကြျောအရှယျ ကလေးငယျတယောကျက မွနျမာစာမြားကို စာလုံးမပေါငျးဘဲ လကျတနျးဖတျပွနိုငျခွငျးကို မယုံကွညျသောကွောငျ့ အမြိုးမြိုးစမျးသပျခဲ့ဖူးကွောငျး တမနျ ခြောငျးကြေးရှာတှငျ နထေိုငျသူ မနီလာကပွောသညျ။
”ပထမတော့ မယုံဘူးလေ။ တရှာထဲနပွေီး သတငျးတော့ ကွားနရေတယျ။ တရကျ စလားလားလေး အိမျကို လာလညျတော့ အိမျမှာ ကပျထားတဲ့ စာကွောငျးတှကေို ဖတျခိုငျးတော့ ဖတျပွနိုငျတယျ။ ပွီးတော့ ဖုနျး ထဲမှာ မှတျထားတဲ့ လူနာမညျတှကေိုလညျး ဖတျပွနိုငျတယျ။ အဲဒီတော့မှ ယုံသှားတာ၊ အံ့လညျး အံ့သွ တယျ”ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။စလားလားသညျ ကလေးတယောကျနှငျ့မတူဘဲ လူကွီးတယောကျ၏ အိန်ဒွမြေိုးဖွငျ့နသေညျကို တှေ့ ခဲ့ရသညျ။ ကြှနျတျောတို့မေးသညျ့မေးခှနျးမြားကို လူကွီးတယောကျ ဖွသေလိုဖွသေညျ။ အခွားကလေးမြားကဲ့သို့ ကစားလမေ့ရှိဘဲ စာဖတျခွငျးနှငျ့ စာသငျခွငျးတို့ကိုသာ ပွုလုပျလရှေိ့ကွောငျး မိခငျဖွဈသူထံမှ သိရသညျ။”သူက အားနရေငျ စာဖတျတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဗမာလိုသာ ဖတျတတျတာ အဓိပ်ပာယျကို သူမသိဘူး။ ထမငျး စားပွီးပွီးလားလို့ ဖတျတတျတယျ။ ဖတျပွီးရငျ ထမငျးစားပွီးပွီးလားဆိုတာ ဘာလဲလို့ ကရငျလို ပွနျမေးတယျ။ အဓိပ်ပာယျကို သူမသိဘူး။ စာသငျတိုငျး ဆော့တယျ။ တခွားကလေးတှလေို ဘောလုံးကနျတာတို့ ဘာတို့ မလုပျဘူး”ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။
ဉာဏျကွီးရှငျလေး စလားလားက သူကွီးလာရငျ အငျဂငျြနီယာ လုပျမညျဟု ပွောသညျ။ အငျဂငျြနီယာ ဆိုတာ ဆောကျလုပျရေးတှလေုပျတာကို ပွောတာဟု ၎င်းငျးက ကြှနျတျောတို့ကို ရှငျးပွနသေေးသညျ။စလားလားကဲ့သို့ ဉာဏျရညျမွငျ့မားသော ကလေးငယျမြားအတှကျ လူမှုဝနျထမျးကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျ လညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနတို့ပူးပေါငျး၍ အစီအစဉျတရပျဖျောဆောငျပေးပါက ၎င်းငျးတို့၏ အနာဂတျမှာ အားတကျဖှယျရာဖွဈပလေိမျ့မညျ။ ထူးဆနျးသော ဉာဏျကွီးရှငျကလေးမြားကို ရှာဖှေ ဖျောထုတျ၍ ဂရုတစိုကျပွုစုပြိုးထောငျပေးသငျ့သညျဟု ယူဆမိပါသညျ။စလားလားနှငျ့ သူ့မိခငျတို့ကို သိခငျြသညျမြား မေးမွနျးပွီးနောကျ ပွနျရနျ နှုတျဆကျကွသညျ။ ဖခငျဖွဈ သူမှာ လယျထဲဆငျးနသေောကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့နှငျ့ မတှလေို့ကျရပါ။ ကြှနျတျောတို့ နှုတျဆကျခြိနျတှငျ စလားလားသညျ အခွားကလေးငယျမြားကဲ့သို့ ‘တာ့တာ’မပွဘဲ လူကွီးတဦးကဲ့သို့ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့ကို တဦး ခငျြး လကျဆှဲနှုတျဆကျခဲ့သညျ။ ဉာဏျကွီးရှငျ စလားလား အငျဂငျြနီယာ ဖွဈ၊ မဖွဈ ဆိုတာကတော့ . . . ။